Jungfrau पार्क, Interlaken मा पुरानो रहस्य | यात्रा समाचार
Jungfrau पार्क, Interlaken मा पुरानो रहस्यहरु
मारिएला क्यारिल | | स्विट्जरल्याण्ड, यात्रा
आज प्राचीन समयमा एलियनको भ्रमण यो पर्याप्त सम्भावित परिकल्पना हो र अब विज्ञान कल्पनिको अनन्य विषय होईन। केही सनसनीखेज टेलिभिजन कार्यक्रमहरू बाहेक, यदि कसैले मनोरञ्जनको घुम्टो खोल्छ भने, एक वास्तविक रहस्य र धेरै चाखलाग्दो सुरागहरू फेला पार्दछ।
म किशोरी हुँदा मेरो बुबाले मलाई सबै किताबहरू भाडामा दिनुभयो एरिच भोन डानिकेन, एक स्विस जसले issues० को दशकमा अग्रसर गरे यी विषयहरूमा कुरा गरेर र विज्ञानको असहज प्रश्नहरू सोधेर। केबल टिभी र इन्टरनेट बिना नै उनका पुस्तकहरू विश्वभरि प्रकाशित भयो र उनले धेरै पैसा कमाएको जस्तो देखिन्छ। आफ्नो भाग्य र नयाँ शताब्दीको आगमन संग, उनले एक लगानी बनाए: Jungfrau पार्क, एक मनोरन्जन पार्क निर्माण गर्नुभयो जुन विश्वका महान रहस्यहरूको वरिपरि घुम्छ.
Jungfrau पार्क, एक सपना साकार हुनेछ
आज भोन डानिकेन 81१ बर्षको उमेर हो र, पुरातन अन्तरिक्ष यात्री सिद्धान्तविद्हरूको क्षेत्रमा। मास्टर। पुरातन समयमा एलियनहरूको भ्रमण र मानव जीवनमा उनीहरूको प्रभावको बारेमा उनका परिकल्पनाहरू बिल्कुल महत्त्वपूर्ण थियो र सन् १ 1968 XNUMX देखि उनको पहिलो पुस्तक, ¿भगवानहरूको रथहरू?, एक बेस्टसेलर थियो जसको कमाईले उनी काम गरेको होटेलको वित्तीय अपवित्र व्यवस्थापनको लागि debtsण र मुद्दा दायर गर्न अनुमति दिन्थ्यो।
उनका पुस्तकहरू 32२ भाषाहरूमा अनुवाद गरिएको थियो र 63 XNUMX मिलियन भन्दा बढी प्रतिहरू बिक्रि भयो। यसले हजारौं र हजारौं दिमागमा शंका, षडयन्त्र र जिज्ञासा रोप्यो। यति धेरै कि यदि यो एक वर्जित थियो र धेरै गम्भीर विषय नभएको भए, आज इतिहास, डिस्कवरी वा नेटगियो जस्ता च्यानलहरूमा उनको सिद्धान्तलाई समर्पित घण्टा र कार्यक्रमहरू छन्। प्रोमीथियस (एलियनको प्रिक्वल फिल्म) का निर्देशक इनुकु रिडले स्कटले भने कि उनी आफ्नो विचारहरुबाट प्रभावित थिए।
सत्य यो हो कि बितेको शताब्दीको अन्त्य र यसको सुरूवातको बीचमा, एउटा मनोरञ्जन पार्क निर्माण गर्ने विचारले उहाँसँग परिपक्व भयो: मानवताका महान् रहस्यहरूको बारेमा एउटा पार्क। उसलाई राख्नुहोस् Jungfrau पार्क र यसमा निर्माण गरियो इंटरलेकन, एक स्विस शहर। मूल रूपमा यो एउटा पार्क हो जुन special१ मीटर उचाईको गोलोको आकारमा केन्द्रीय मंडपको साथ सात विशेष क्षेत्रहरूमा विभाजित गरिएको छ, जसको उच्चतम बिन्दुबाट तपाईंसँग सम्पूर्ण परिसरको उत्तम दृश्य छ।
TODO भोन डानिकेनको विचारहरु पछी पार्क निर्माण गरिएको हो, कसरी एलियन्सले पृथ्वीमा बौद्धिक जीवन ल्याए र यसको विकासमा मद्दत पुर्‍यायो भन्ने बारेमा उनका विचारहरू। यी विभिन्न क्षेत्रहरूका नाम हुन्: नाज्का, मेगालिथिक स्टोन्स, माया, ओरिएन्टे, भिमाना र डेसाफो.
नाज्का क्षेत्र रहस्यमय र शानदार पेरू लाइनहरूमा केन्द्रित छ जुन माथिको तिनीहरूको भव्यतामा मात्र देख्न सकिन्छ। मेगालिथिक स्टोन्स क्षेत्र स्टोनहेंजसँग सम्बन्धित छ, दक्षिणपश्चिमी इ England्ग्ल्यान्डको सालिस्बरीमा रहेको विशाल ढु stones्गाको घेरा, मायाले यस अमेरिकी सभ्यताको पौराणिक कथा, यसको जटिल क्यालेन्डरलाई केन्द्रित गर्‍यो, र पूर्व दुई भागमा विभाजित गरिएको छ: एउटा बताउँछ हामीलाई सहारा अन्तर्गत भूमिगत सुरुnel्गहरूको बारेमा जहाँ मिश्रित जनावरको हड्डीको साथ सारकोफागी फेला परेको छ र अर्को मिस्रको पिरामिडसँग सम्बन्धित छ।
विमान भारतीय पौराणिक कथाका केही अनौंठो जहाजहरूको नाम हो, उडान गर्ने मेशिनहरू जसमा भगवानहरूले यात्रा गरेका थिए जसका डिजाइनहरूले आधुनिक ईन्जिनियरहरूको नक्कल गर्न कोसिस गरेका छन्। कल्पना वा वास्तविकता, विचार सधैं यी प्रश्नहरूको बारेमा आफैलाई सोध्नु हो, उत्तरहरु उद्यम गर्न, अर्थोडक्स पुरातात्विकले के भन्छ भनेर टिपटोमा सृजना गर्नुको सट्टा फरक परिकल्पनाहरू ह्यान्डल गर्दै।
अन्तिम नौटिलस भनिने अर्को क्षेत्र पनि छ। यो एक पानीमुनि सिमुलेशन हो जुन ती शानदार निर्माणहरू प्रकट गर्ने लक्ष्य राख्दछ जुन ती दुनिया भरमा डुबेका छन्। यी क्षेत्रहरूमा क्याफेटेरिया र एक रेस्टुरेन्ट थपियो। सत्य यो हो पार्क नोभेम्बर २०० in मा एक पटक बन्द भयो वित्तीय समस्याहरूको लागि तर २०० from देखि फेरि ग्रीष्म seasonतुमा खोल्न सुरु भयो।
समयसँगै, बिभिन्न आकर्षणहरू थपिएको छ र आज, बन्जी ट्राम्पोलाइनसँग खेल र फन भनिने आउटडोर पार्क छ, हिड्नका लागि Segways र खेल मैदान। साइट घटनाहरु, जन्मदिन, र जस्तै को लागी भाँडामा लिन सकिन्छ। मानौं कि यो त्यस्तो स्थान हो जुन खुला रहनको लागि सबै समयमा यात्राको आवश्यक पर्दछ, त्यसैले पैतृक रहस्यहरूमा यसले वयस्कहरू र बच्चाहरू र बच्चाहरूलाई रमाईलो गर्न आमाबाबुलाई आकर्षित गर्न थप क्लासिक मजा थप्यो।
यो गर्मी २०१ 2016 Jungfrau पार्क मे १ मा खोलियो र अक्टोबर २ on मा बन्द हुन्छ। यो हरेक दिन बिहान ११ देखि दिउँसो 11 सम्म खुल्छ। यहाँ तपाईं संग अधिक छ जंगफ्राउ पार्क, भोन डानिकेन पार्क भ्रमण गर्न व्यावहारिक जानकारी:
मूल्यहरु: CHF .40.00०.०० प्रति वयस्क र CHF २२.oo प्रति बच्चा। विद्यार्थीहरूले प्रमाणित कार्ड प्रस्तुत गरेर २ pay तिर्ने गर्दछन्। तपाईं यूरोमा भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ, यद्यपि परिवर्तन स्विस फ्रान्कमा डेलिभर हुनेछ। टिकटमा मल्टिमेडिया शो, फन शटल र नौटिलस पनडुब्बीमा यात्रा र खेल ठाउँको प्रवेश समावेश छ। थप रूपमा, segway सवारी (CHF 22) र Bungee Trampolin चार्ज गरिएको छ। चारका परिवारहरूमा २०% छुट छ र यदि यो तपाईंको जन्मदिन हो भने तपाई स्वतन्त्र हुनुहुनेछ।
त्यहाँ एक संयुक्त टिकट छ कि पार्क र सेन्ट बीटस गुफामा सीएचएफ .55.00 XNUMX.०० को लागि एक घण्टा निर्देशित यात्राको साथ भ्रमण समावेश गर्दछ।
कसरी पुग्नेः तपाईं ट्रेनलाई इन्टरलाकेन ओस्ट स्टेसनमा लैजान सक्नुहुनेछ र त्यहाँबाट पार्क १० स्टपमा बस १०103 लिनुहोस्। तपाईं ट्याक्सी लिन वा स्टेशनबाट हिंड्न पनि सक्नुहुनेछ, जुन कि त टाढा पनि छैन।
यदि तपाई एरिक भोन डानिकेनलाई व्यक्तिगत रूपमा सुन्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ किनकि उसले मे र अक्टुबर बीचमा एक पटक वार्ता गर्दछ। अवश्य पनि, तपाइँले मिति र समयहरू पत्ता लगाउन पार्कको वेबसाइट भ्रमण गर्नुपर्नेछ।
यदि तपाईं स्विजरल्याण्ड भ्रमण गर्न कुनै बहाना खोज्दै हुनुहुन्थ्यो भने, यसको अल्पाइन परिदृश्य र यसको चकलेट बाहेक, सायद एलियन तपाईंको चुम्बक हुन्। कसरी?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » स्विट्जरल्याण्ड » Jungfrau पार्क, Interlaken मा पुरानो रहस्यहरु
पार्टी पछाडि Ibiza पत्ता लगाउनुहोस्
इटालीमा भ्रमण गर्नको लागि रोमान्टिक ठाउँहरू